pc auto shutdown လုပ်ချင်သူတွေအတွက်ပါ ~ မိုးညိုသား
pc auto shutdown လုပ်ချင်သူတွေအတွက်ပါ
5:43 PM နည်းပညာ( ကိုညီနေမင်းစီက ယူလာတာပါ) No comments
PC auto shutdown 4.9 (latest version) ဖြစ်ပါတယ်.
ကဲ အရင်ကဟာက download လုပ်မရတော့ဘူးဆိုလို့ အသစ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်. ကွန်ပျူတာကို auto shutdown လုပ်ချင်တာ၊ auto turn on လုပ်ချင်တဲ့သူများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်. အားလုံးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. အထဲမှာ keygen ပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်. keygen သုံးနည်း မသိသူများ ဆိုက်ရဲ့ ညာဖက်ခြမ်းမှာ သုံးနည်း လေးမျိုး တင်ပေးထားပါတယ်. အဲ့အထဲက keygen ဖြင့် license version ဖြစ်အောင်လုပ်နည်းကို download လုပ်ပြီးတော့ ကြည့်လိုက်ပါ.
Minus | Mediafire